Yohane Suboni Siesiee Kwan Mu | Yesu Asetena
YOHANE KYERƐKYERƐƐ NKURƆFO NA ƆBƆƆ WƆN ASU
ƆBƆƆ NNIPA PII ASU, NANSO ƐNYƐ OBIARA
Yɛaka sɛnea Yesu dii mfe 12 no ɔkɔɔ asɔrefie hɔ kɔbisabisaa akyerɛkyerɛfo no nsɛm. Mfe 17 akyi no, na obiara reka Yesu busuani Yohane ho asɛm. Ná ɛyɛ afe 29, na na Yohane wɔ Yordan Asubɔnten no atɔe fam rekyerɛkyerɛ nkurɔfo wɔ nkuro nketewa a ɛwɔ hɔ nyinaa mu.
Wohwɛ Yohane ahosiesie na wotie ne nkyerɛkyerɛ a, wohu sɛ na ɔda nsow koraa. Ná n’atade yɛ yoma nwi na n’abɔso nso yɛ aboa nwoma. Aduane a na ɔdi ne ntutummɛ anaa mmɛbɛ ne wuram ɛwoɔ. Asɛm bɛn na ɔde too dwa? N’asɛm ne sɛ: “Monsakra mo adwene, na ɔsoro ahennie no abɛn.”​—Mateo 3:2.
Wɔn a wɔtiee Yohane no, asɛm no pusuu wɔn paa. Wɔn mu pii huu sɛ ɛsɛ sɛ wɔsakra wɔn adwene na wɔgyae bra a wɔrebɔ no. Wɔn a wɔbaa ne nkyɛn no, na wɔfiri “Yerusalem ne Yudea nyinaa ne nsase a atwa Yordan ho ahyia nyinaa so.” (Mateo 3:5) Nkurɔfo a wɔbaa Yohane nkyɛn no pii sakraa wɔn adwene, enti ɔde wɔn hyɛɛ Yordan asubɔnten no mu bɔɔ wɔn asu. Adɛn ntia?
Ná wɔabu Onyankopɔn Mmara apam no so. Ɛho adwensakra a wɔnyae nti na Yohane bɔɔ wɔn asu. (Asomafoɔ Nnwuma 19:4) Nanso ɛnyɛ wɔn nyinaa na na wɔanya adwensakra ma wɔfata asubɔ. Bere a nyamesom mpanimfoɔ ne Farisifo ne Sadukifo bi baa Yohane nkyɛn no, ɔfrɛɛ wɔn “nhuritia mma.” Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monso aba a ɛkyerɛ adwensakra na monnsusu mo akomam sɛ, ‘Yɛn agya ne Abraham.’ Na mese mo sɛ Onyankopɔn bɛtumi ama Abraham anya mma afiri aboɔ yi mu. Akuma no da nnua no nhini ho dada; enti dua biara a ɛnso aba pa no wɔbɛtwa de agu gya mu.”​—Mateo 3:​7-​10.
Asɔfo ne Lewifo no huu sɛ Yohane rebɔ nnipa pii asu na obiara adwene wɔ ne so. Afei wɔhuu sɛ asɛm a ɔkura no nso mu yɛ duru. Enti wɔsoma kɔbisaa no sɛ: “Wone hwan?”
Yohane kaa no pen sɛ: “Ɛnyɛ mene Kristo no.”
Afei wɔbisaa sɛ: “Ɛnneɛ na woyɛ hwan? Wone Elia anaa?”
Ɔyii ano sɛ: “Ɛnyɛ mene no.”
Ɛnna wɔbisaa no sɛ: “Wone Odiyifoɔ no?” Nea na wɔpɛ sɛ wɔhu ne sɛ ɔno ne Odiyifo kɛse a Mose kaa sɛ ɔbɛba no anaa.​—Deuteronomium 18:​15, 18.
Yohane yii wɔn ano sɛ: “Dabi!”
Afei wɔn ani beree ne so bisaa sɛ: “Woyɛ hwan? na yɛnnya mmuaeɛ bi nkɔma wɔn a wɔsomaa yɛn no. Ɛdeɛn na woka fa wo ho?” Yohane buaa sɛ: “Mene deɛ ne nne reteam wɔ serɛ so sɛ, ‘Momma Yehowa kwan ntene,’ sɛdeɛ odiyifoɔ Yesaia kaeɛ no.”​—Yohane 1:​19-​23.
Wɔsan bisaa sɛ: “Sɛ ɛnyɛ wone Kristo anaa Elia anaa Odiyifoɔ no a, ɛnneɛ adɛn nti na wobɔ asuo?” Ɔno nso maa wɔn mmuaeɛ a ɛtɔ aso mu sɛ: “Me deɛ, mebɔ asu nsuo mu. Nanso obi gyina mo mfimfini a monni no, deɛ ɔdi m’akyi no.”​—Yohane 1:​25-​27.
Enti Yohane gye toom sɛ ɔreyɛ adwuma de abɔ kwan ama Mesia no. Ná ɔreboa nkurɔfo ama wɔayɛ ahoboa atwɛn Mesia a ɔbɛyɛ Ɔhene no. Yohane kaa ne ho asɛm sɛ: “Deɛ ɔdi m’akyi reba no wɔ tumi sene me, na memfata sɛ mɛworɔ ne mpaboa.” (Mateo 3:​11) Yohane kaa mpo sɛ: “Deɛ ɔdi m’akyi reba no adi m’anim ɛfiri sɛ na ɔwɔ hɔ ansa na mereba.”​—Yohane 1:15.
Asɛm a na ɛda Yohane ano ne sɛ: “Monsakra mo adwene, na ɔsoro ahennie no abɛn.” (Mateo 3:2) Ná saa asɛm no fata paa, efisɛ ɛbɔɔ nkurɔfo nkae sɛ Yesu Kristo rebɛhyɛ ne som adwuma ase, na ɔno nso ne Ɔhene a Yehowa ayi no.
Dɛn na ɛmaa Yohane daa nsow? Adwuma bɛn na ɔbɛyɛe?
Adɛn nti na Yohane bɔɔ nkurɔfo asu?
Asɛm bɛn na na ɛda Yohane ano? Adɛn nti na na ɛfata paa?